मेथिका यति धेरै अदभू*त फाइदा, थाहा पाउनुहोस ! « Bagmati Online
ओलीको पार्टी अब छिट्टै ‘कोल्याप्स’ हुन्छ : मेटमणि चौधरी
कतारबाट आयो खुसीको खबर : अब अवैध व्यक्तिले कम्पनी खाेजेर काम गर्न पाउने
अब दक्षिण कोरिया जानेले पाँचहजार अमेरिकन डलर बराबरकाे बीमा गराउनुपर्ने
ग्वार्कोमा दुई वर्षभित्र फ्लाइओभर बन्ने
भाइरलमन्त्री आले फेरि चर्चामा, फेरि पनि देखाए धमाका !
सोझो र इमानदार मान्छेलाई इज्जत होइन प्रयोग गरिन्छ यहाँ !
By: TopLine Technology
मेथिका यति धेरै अदभू*त फाइदा, थाहा पाउनुहोस !
काठमाडौं। धेरै जसो सबैका भान्सामा प्रयोग हुने मेथी बहुउपयोगी खाद्य पदार्थ हो । मेथीको प्रयोग बाट हामीले धेरै रोगहरुलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौ। तर हामी मध्ये धेरै जसोलाई मेथी मन नपर्न पनि सक्छ। तर हामीलाई लाग्छ यो पढे पछि तपाइको मन बदलिने छ । यस्ता छन् बहुउपयोगी मेथीका फाइदाहरु :
१.मेथीको सेवनले मृ’गौलालाई स्वस्थ राख्छ । मेथीमा हुने तत्वले पत्थरीको समस्या हुनेलाई समेत फाइदा गर्ने गर्छ । यसले भित्रका विकार पिसावको माध्यमबाट बाहिर निकाल्ने काम गर्छ । २.पेट खराब हुँदा या अपचको स्थितिमा मेथीको सेवन लाभकारी हुनछ ।यसले पेट पोल्ने र अन्य समस्या समेत हटाउँछ ।यसले भोक पनि बढाउँछ ।
३.मेथीको सेवनबाट शरीरमा टेस्टोस्टेरोनको स्तर पनि बढ्छ, जसबाट मांसपेशी बन्छ र शरीर मजबूत हुन्छ । ४.मेथीको सेवनले स्तन क्यान्सर र प्रोस्टेट क्यान्सरको खतरा पनि कम गर्छ । ५.मेथीको सेवनले रगतमा ग्लुकोजको स्तर कम हुन्छ, जसबाट डाइबेटिज को टाइप वान र टाइप टु दुवै नियन्त्रित हुन्छ ।
६.मेथीका दानाले डन्डीफोर नियन्त्रणका लागि पनि निक्कै उपयोगी भूमिका खेलेको हुन्छ । यसले छालाको एमिडर्मिस तहमा रहेको टक्सिनलाई निकाल्छ र डन्डीफोरको दाग समेत हटाइ दिन्छ । डन्डीफोरले दिक्क पारेको हुनु हुन्छ भने मेथी तपाइँका लागि अचुक औषधी बन्न सक्छ । ७.मेथीको सेवनले शरीरमा राम्रो कोलेस्टेरोल बढ्छ र नराम्रो कोलेस्टेरोल घट्छ । यसबाट मुटुसम्बन्धी रोग पनि कम हुन्छ ।
८.कपाल झर्ने समस्या भएकाहरुका लागि पनि मेथी अत्यन्तै उपयोगी हुन्छ । मेथीको दानामा कपाललाई मजबुद गर्ने क्षमता हुन्छ । यसको पेष्ट बनाएर नरिवल वा जैतुनको तेल मिलाएर कपालमा लगाउँदा यसले कपाल झर्न निकैनै कम गर्छ । यदि तपाइँलाई चायाँ को समस्या छ भने मेथी तपाइँका लागि अचुक औषधी बन्छ ।
प्रकाशित मिति : २०७६ मङ्सिर ५ गते बिहिवार
स्वास्थ्य सँग संबन्धित
विदेश जानेहरुलाई खोप लगाएको प्रमाणीकरण निःशुल्क रुपमा गर्नू : मन्त्रालय
देउवा सरकारकाे लाेकप्रिय निर्णय १८ वर्ष माथिका सबैलाई खाेप दिने !
द्वन्दग्रस्त मुलुक यमनमा तीन महिना सेवा गरेर फर्के डा. गोविन्द केसी
जागेश्वर गौतमलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताबाट हटाइयो
कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन २४६ को मृत्यु, ८,१७३ संक्रमित